မိသားစုလိုက်စားဖို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် အလှူဒါန ပြုလုပ်ဖို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်လျှာလည်သွားစေမယ့် နို့စိမ်းခေါက်ဆွဲချက်နည်း – Youth Bar
မိသားစုလိုက်စားဖို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် အလှူဒါန ပြုလုပ်ဖို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်လျှာလည်သွားစေမယ့် နို့စိမ်းခေါက်ဆွဲချက်နည်း
နို့စိမ်းခေါက်ဆွဲ ချက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ချက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် နို့စိမ်း(သို့)အုန်းနို့ ကို ဟင်းရည်ရမှ နောက်ဆုံးမှထည့်ပါ အထည့်စောရင် ဟင်းရည် အသိုးမြန်တယ်
ဟင်းရည်မပွက်သေးဘဲ ငံပြာရည်မထည့်ပါနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင် ကြက်သားဆီသတ်ကတည်းက ငံပြာရည်များများထည့်ပီး အငန်လေးလေးနဲ့ တစ်ခါတည်း ဆီသတ်ထားလိုက်ပါ
ဟင်းရည်အိုးထဲ သပ်သပ်ထည့်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ သပ်သပ်ထည့်ရင် ဟင်းရည်အရသာ သိပ်မကောင်းဘူး ထင်လို့ပါ
ငံပြာရည်ကို ရိုးရိုးငံပြာရည်သုံးတာထက် ငါးငံပြာရည်အချို(သို့) ကင်းမွန်ငံပြာရည်အချို သုံးပေးပါ ဟင်းရည် အရသာပိုကောင်းတယ်
မုန့်ဟင်းခါး ၊အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ၊နို့စိမ်းခေါက်ဆွဲတွေကျ ဟင်းရည်က အသက်ပဲလေနော့
ဟင်းရည် အသိုးမမြန်အောင် ဟင်းရည်အိုးထဲကနေ တိုက်ရိုက် ဇွန်းနဲ့ ခပ်မမြည်းဖို့.. ဇွန်းနဲ့ခပ်မြည်းတယ်ဆို အဲ့ဇွန်းနဲ့ အိုးထဲကိုပြန်မခပ်ဖို့ပါ
လူကြီးတွေဆို သိပေမယ့် ကလေးတွေကျ မသိကြတော့ သတိပေးထားဖို့ပါလျှာရှည်တာများသွားပြီဆိုတော့ ချက်နည်းပြောပြီနော်
ကုလားပဲကို နူးနေအောင်ပြုတ်ပီး ထောင်း(သို့)ချေထားပါ။ ကုလားပဲ အဆင်သင့်မလွယ်ရင် ပဲစိမ်းမှုန့် ကို ရေဖျော်ထားပါ
ဆန်ကျက်မှုန့်ကိုလဲ ရေဖျော်ထားပါ ဆန်ကျက်မှုန့်က မထည့်လဲရပါတယ်
ကြက်သားကို အတုံးသေးသေးတုံးပီး ဆား နနွင်းနယ်ထားပါ။ ကြက်သွန်နီ ကြက်သွန်ဖြူ ချင်းနည်းနည်းကို ရောပီးထောင်းထားပါ။ ဘဲဥ(သို့)ကြက်ဥကို ပြုတ်ပီး အခွံခွာ ခွာပီးရင် အပ်သန့်လေးနဲ့ ဥအနှံ့လိုက်ထိုးပါ
ဟင်းရည်ထဲထည့်ရင် အရသာဝင်အောင်လို့။ ကြက်သွန်နီဥ သေးသေးလေးတွေ နွှာထား အလုံးလိုက်ထည့်ဖို့။ နို့စိမ်း ၁ ဘူး အဆင်သင့်ဖောက်ထား။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ သုံးတဲ့ နို့စိမ်းဘူးလေ မသိမှာစိုးလို့ လျှာရှည်တာ
ကြက်သားဆီပြန်ချက်သလိုပဲ ကြက်သွန်နီ ဖြူ ချင်း အရောထောင်းကို ဆီများများနဲ့ဆီသတ်။ ဆီများများနဲ့နော်။ ဆီနည်းရင် ကပ်နေမှာဆီသတ်မကောင်းတော့ဘူး။ များတာက ပြီးရင် ဖယ်လိုက်လို့ရတယ်
နနွင်းမှုန့် နည်းနည်းထည့်အရောင်တင်မှုန့် များများထည့် မွှေပါ။ အရောင်တင်မှုန့် အတူးမလွန်စေဖို့ ဂရုစိုက်ပါဆီသတ်မွှေးလာရင် ကြက်သားတွေထည့်..အရသာထည့်။ အဲ့မှာ လျှို့ဝှက်ချက်က တရုတ်မဆလာ နည်းနည်းထည့်တယ် ပိုမွှေးပီး ပိုစားကောင်းတယ်ထင်လို့
နောက် ထန်းလျှက် အနေတော် ၂ လုံးထည့်တယ်။ ဟယ်! ဘာတွေ ထည့်တာတုန်းလို့ မပြောနဲ့နော်။ ထန်းလျက်က ဟင်းရည် အရောင်လှတယ်
ပီးတော့ အိမ်က အချိုမှုန့်မသုံးတဲ့ အိမ်ဆိုတော့ အစားထိုးတဲ့သဘောပေါ့ သကြားနဲ့ ထန်းလျက်ဆို ထန်းလျက်က အရသာပိုလေးလေးပင်ပင်ရှိလို့ သကြားမသုံးဘဲ ထန်းလျက်သုံးတာ။ ကိုင်း! ဒီက ဆရာစားမချန်ဘူးနော် လျှို့ဝှက်ချက်ပါ အကုန်ပြောပြပေးတာ
ကင်းမွန်ငံပြာရည်အချို များများထည့် ကြက်သားမှုန့်ထည့် ဟင်းအနှစ်ကို အငန်လေးထားပါ အာ့မှ ဟင်းရည်အိုးထဲ ထည့်ရင် အနေတော်ဖြစ်မှာ ကြက်သားနူးအောင် ရေနည်းနည်းထည့်ပီး အဖုံးအုပ်ထားပါတစ်ရေဆို ရပါတယ်ပြီးရင် ဟင်းရည်အိုးထဲ ထည့်မှာဆိုတော့ အရမ်းမနူးလဲ ကိစ္စမရှိဘူး
ကြက်သားဟင်းအနှစ်ချက် ရပီဆို ဟင်းရည်ချက်မယ့် အိုးထဲကို ရေတစ်ဝက်ထည့်ပီး ဆူလာအောင်တည်။ ကျွန်တော်က ရေအစား ကြက်ရိုးပြုတ်ရည် သုံးတယ် အရသာ ပိုရှိအောင်လို့ရေဆူရင် ကုလားပဲထောင်းထားတွေ ထည့်ပါ
(ပဲစိမ်းမှုန့်နဲ့ဆို ရေမဆူလာခင်ထည့်ပီး မွှေရပါတယ် ရေဆူမှထည့်ရင် ပဲမှုန့်တွေက မကြေတော့ဘဲ အသီးတွေ ဖြစ်တတ်လို့) ပဲထည့်ပီး ပွက်လာပီဆို ဆန်ကျက်မှုန့်ထည့်အိုးမကပ်အောင် အောက်ခြေခြစ်ပြီး မွှေပေးပါ
ပီးရင် ကြက်သားဟင်းအနှစ်ချက် ထည့်ပေးပါ။ ခဏ အပွက်ထားပီး ဘဲဥတွေထည့်ပါ။ တခြားနှစ်သက်ရာ အစာပလာထည့်ပါ(ဘဲသွေး အသားတု ငါးဖယ်လုံး) ဟင်းရည် အပျစ်အကျဲကို ကိုယ်နှစ်သက်သလို ရေ ထပ်ဖြည့်ရင်း ပြင်ပေးပါ။ အရသာမြည်းပါ
လိုအပ်ရင် ဆား ကြက်သားမှုန့်ထည့်ပါ။ ဟင်းရည်ကျအောင် တည်ပါ။ ကြက်သွန်နီဥ အလုံးလိုက်လေးတွေ ထည့်ပါ။ ကြက်သွန်နီဥ အရမ်းမနူးခင် နို့စိမ်းထည့်ပါ နို့စိမ်းထည့်ပီး တအောင့်လောက် ပွက်ပွက်ဆူအောင်ထားပြီးရင် နို့စိမ်းခေါက်ဆွဲ ဟင်းရည်ရပါပြီ
ဟင်းရည်အိုးထဲက ဘဲဥလေးတွေဆယ်ပြီး မုန့်ပွဲပြင်မှ ထည့်စားပေါ့နော်။ ဟင်းရည် အရသာဝင်နေတဲ့ ရှယ်အိုးဘဲဥနော်။ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ဆိုရင်လဲ နို့စိမ်းနေရာ အုန်းနို့ထည့်ချက်ရုံဖဲပါပ
နှင်းဆီပျိုးပင်သွားဝယ်စရာမလိုဘဲမိမိအိမ်မှာတင်ကိုင်းချိုးပြီးအလွယ်တကူစိုက်ပျိုးနည်း နှင့် ပြုစုနည်း